Vaovao - Fampiharana ny Air Compressed
Ny fotodrafitrasa indostrialy dia mampiasa rivotra voafehy ho an'ny asa maro. Saika ny indostrian'ny indostrialy dia manana compresseur roa farafaharatsiny, ary amin'ny zavamaniry antonony dia mety misy fampiasana an-jatony amin'ny rivotra voafehy.
Ny fampiasana dia misy fitaovam-piadiana mahery vaika, fitaovana fonosana sy mandeha ho azy, ary mpanera. Ireo fitaovana pneumatika dia mazàna kely kokoa, maivana ary mora volavolaina noho ny fitaovana mandeha amin'ny herinaratra mandeha amin'ny herinaratra. Manome herinaratra malefaka ihany koa izy ireo ary tsy simban'ny be loatra. Ireo fitaovana mandeha amin'ny rivotra dia manana ny fahaizan'ny hafainganam-pandeha tsy voafetra sy ny fanaraha-maso ny tsela, ary afaka mahatratra ny hafainganam-pandeha sy tsela tadiavina haingana dia haingana. Ankoatr'izay dia matetika izy ireo no voafantina noho ny antony azo antoka satria tsy mamokatra taratra ary manana fananganana hafanana ambany. Na dia manana tombony maro aza izy ireo, ny fitaovana pneumatika dia mazàna tsy dia misy angovo mihoatra ny fitaovana elektrika. Indostrian'ny famokarana maro koa no mampiasa rivotra sy etona voatetika ho an'ny fandoroana sy ny fizotran'ny fizotrany toy ny fitrandrahana oksidasiana, fizarazaran-tany, cryogenika, fampangatsiahana, filtration, tsy fahampiana rano, ary aeration. Ny tabilao 1.1 dia mitanisa indostria mpamokatra lehibe sasany sy ireo fitaovana, mampita, ary manodina ireo hetsika izay mitaky rivotra voafehy. Ho an'ny sasany amin'ireo rindranasa ireo, na izany aza, ny loharanom-pahefana hafa dia mety hahomby kokoa amin'ny vidiny kokoa (jereo ny tarehin-tsoratra mitondra ny lohateny hoe Fampiasana rivotra tsy voatanisa ao amin'ny fizarana 2).
Ny rivotra voafehy dia mitana andraikitra lehibe amin'ny sehatra tsy famokarana maro, ao anatin'izany ny fitaterana, ny fananganana, ny fitrandrahana, ny fambolena, ny fialamboly ary ny indostrian'ny serivisy. Ny ohatra sasany amin'ireo fampiharana ireo dia aseho amin'ny tabilao 1.2.
Tabilao 1.1 Sehatra indostrialy fampiasana ny rivotra voafatotra
Indostrian'ny indostria ohatra ampiasaina amin'ny rivotra
HAINGON'NY Mampita, mametaka, manome hery ny fitaovana, manara-maso sy mihetsika, fitaovana mandeha ho azy
Fitaovana mandeha amin'ny fiara famahanana, fametahana, fanaraha-maso ary actuators, mamorona, mampita
simika Mampita, mifehy ary mpikatroka
Sakafo Ny tsy fahampian-drano, ny tavoahangy, ny fanaraha-maso sy ny actuators, mampita, manaparitaka fonosana, manadio, manangona fonosana
Furniture Fanamafisana ny pistona an'habakabaka, fanamafisana ny fitaovana, fametahana, famafazana, fanaraha-maso sy fihetsiketsehana
Famokarana ankapobeny Fametahana, fanidiana, fanamafisana ny fitaovana ary fanadiovana, fanaraha-maso sy hetsika
Hazo sy hazo Sawing, manainga, clamping, tsindry fitsaboana, fanaraha-maso sy actuators
Fitaovana metaly Fivarotana herinaratra fivorian'ny Assembly, fanamafisana ny fitaovana, fanaraha-maso sy fihetsiketsehana, famolavolana tsindrona, famafazana
solitany Manodina famoretana, fanaraha-maso ary mpikatroka entona
Metaly voalohany Mitsonika vacuum, mifehy sy actuators, manangana
Pulp sy taratasy Mampita, mifehy ary mpikatroka
Vovoka sy plastika Fitaovana fanamafisana, fametahana, fanaraha-maso ary fampihetsiketsehana, fananganana, famoahana gazety, famolahana tsindrona
Vato sy tanimanga ary vera Mampita, mifangaro, mifangaro, mifehy sy mpihetsika, fitaratra mitsoka sy mamolavola, mangatsiaka
lamba Rano manintona, clamping, mampita, fitaovana mandeha ho azy, fanaraha-maso sy actuators, fanenomana jet loom, fihodinana, firafitra
Tabilao 1.2 Fampiasan'ny sehatr'asa tsy miankina amin'ny rivotra voafehy
FAMBOLENA Fitaovana fiompiana, fikirakirana ny akora, famafazana ny voly, milina fanaovana ronono
harena ankibon'ny tany Fitaovana pneumatika, fananganana, paompy, fanaraha-maso ary mpikatroka
Taranaka mahery Manomboka turbinina etona, fanaraha-maso mandeha ho azy, fanaraha-maso ny famoahana
NY FIALAM-BOLY Valan-javaboary fialamboly - frein-drivotra
Kianja golf - rafitra rafitra famafazana, zezika, famafazana
Hotely - ascenseur, fanariana maloto
Ski Resorts - fanaovana oram-panala
Teatra - fanadiovana ny projet
Fikarohana anaty rano - fiara mifono vy
Serivisy amin'ny serivisy Fitaovana pneumatika, fantsom-batana, rafi-pamatrarana rivotra, milina fanindriana akanjo, rafi-pisefoana hopitaly,
Fitaovam-pitaterana fifehezana ny toetrandro
Rano maloto Fitaovana pneumatika, fiakarana, rafitra fanamoriana rivotra
fitsaboana Sivana vacuum, mampita